चलाखीपनको प्रयोग २० आइफोन–७ बाट १ घर - सबैको समाचार
चीन महिला नागरिकले ब्याईफ्रेण्डहरुको प्रयोग गरी आफ्नो लागि घर खरिद गरेकी छिन् । उनले आफ्नो चलाखीपनको प्रयोग गरी सो कार्य गर्न सफल भएकी हुन् । उनले घर कसरी खरिद गरिन त ? रोचक तथ्य कसैका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ
आफ्ना २० जना केटा साथीहरु बनाई चीनको सेन्जेनकी ती महिलाले सबैलाई १/१ वटा एप्पलको आइफोन ७ नामक मोबाइल खरिद गर्न लगाए । उनले सबैले दिएको १–१ वटा आइफोन जम्मा गरी एक साथ विक्री गरिन र सो रकमले घर खरिद गरेकी छिन् ।
यो घर उनले खरिद गरेको नभई केबल काल्पनिक मात्र हो ।
यी युवतीले गरेको क्रियाकलापको बारेमा उनकै कार्यालयका सहकमीले एक ब्लथमार्फत खुलासा गरेका थिए । ब्लगमा उल्लेख गरे अनुसार ती युवतीे आफ्नो केटासाथीहरुले दिएको आइफोन ७ बिबो नामक सोसल साइटबाट बिक्री गरी रम्रो रकम हात परेकी हुन् ।
घर खरिद गरेको खुसियालीमा आफ्ना साथीहरुलाई आफ्नै घरमा पार्टी दिइकी थिइन् साथै उनका साथीहरुले उनलाई घर खरिद गर्नुको स्रोतका बारेमा बताए सँगै उनले साथीहरुलाई उनले आफ्नो कुरा सुन्दा उनका साथीहरु ३ छक परेको एजेन्सीको दाबी छ ।
बाबु आप्रवासी कामदार र आमा गृहिणी रहेका परिबारकी उनी जेठी छोरी अहिले उनी सोसल मिडियामा यस कार्यबाट भाइरल नै बनेकी छिन् । तर उनले सञ्चार माध्याममा आफ्नो अन्र्तवार्ता र विचारहरु राख्न भने चाहेकी छैनन् ।
बच्चा जन्माउने पुरुष
फेसबुकले ६० करोड पासवर्ड वर्षौंसम्म स्टोर गरेर राख्यो’
मध्यराति कम्बल बोकेर सडकमा निस्किए धुर्मुस
धुलिखेल अस्पतालले कोरोना पोजिटिभको रिपोर्ट अर्कै व्यक्तिलाई दियो
यसरी भिड्दै छन् प्रदेश नम्बर २ मा दलहरू : कस्को तालमेल को सँग ?
फेरि उठ्यो बुढीगण्डकीको विवाद, चीनप्रति ठूलो अविश्वास
टिकटक बनाउने क्रममा झोलुंगे पुलबाट खसेका युवकको मृ’त्यु